McCain's pick: Sarah Palin
မနေ့ကပဲ ဒကာနှစ်ယောက် ရောက်လာလို့ နောက်နောက်ပြောင်ပြောင် ပြောလိုက်သေးတယ်။ အယ်လင်နာ ရုစဗဲ့ စကားကို ကိုးကားပြီးတော့ပါ။ အယ်လင်နာ ရုစဗဲ့ကပြောတယ်၊ “ကြီးကျယ်ခမ်းနားသူတွေက အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေအကြောင်း ပြောတယ်။ အသိဉာဏ် အလယ်အလတ်ရှိသူတွေကတော့ အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်း ပြောတယ်။ အသိဉာဏ်နိမ့်သူတွေကတော့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်း ပြောလေ့ရှိတယ်” .... တဲ့။ “ကျုပ်က အတွေးအခေါ်စာ ကို ရေးနေတော့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသူထဲမှာ ပါတယ်”လို့ သူတို့ကို နောက်လိုက်တာ။
ဒီအချိန်အထိ ရီပတ်ဘလစ်ကင်က ဒုတိယသမ္မတလောင်း စာရင်းထဲမှာ မစ္စ ပေးလင်း ပါဝင်တယ်ဆိုတာ သိသူက အတော်နည်းပါးပါတယ်။ အချို့သိသူတွေတောင်မှပဲ သိပ်ပြီးအလေးအနက်မထားလို့ သူမအပေါ် အာရုံလည်း မရောက်လှပါဘူး။ ဟုတ်တယ်လေ၊ ပေလင်းဆိုတဲ့နာမည်က အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ထင်ရှားလှတဲ့ နာမည်တစ်ခုမှ မဟုတ်တာ။ ဟော .... ခုတော့ သူမက အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးက အဓိက ပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ ဒုတိယသမ္မတလောင်းဖြစ်လာပြီပေါ့။ မထင်မှတ်တဲ့ ပါတီဘက်ကနေ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပေါ်ထွက်လာပြီပေါ့။
ဒီအခါမျိုးမှာ သူတို့အမြဲပြောပြောနေတဲ့ အတွေ့အကြုံနုနယ်သေးတာတွေ၊ အရည်အချင်း မပြည့်ဝသေးတာတွေ၊ အချိန်မရာက်သေးတာတွေ၊ ဒါတွေအတွက် မစဉ်းစားလေရော့သလား။ မိုးမပြိုနိုင် .... ပြိုခဲ့သော်။ ကိုယ်ကပဲ အစိုးရိမ်လွန်နေသလိုများ ဖြစ်နေသလားတော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ မစ္စတာအိုဘားမားက မစ္စပေလင်းအတွက် ဝမ်းမြောက်စကား ဆိုရင်းနဲ့အတူ နောက်ဆက်တွဲ ဆုတောင်းပေးတဲ့ စကားလေးကို ယူပြီးသုံးချင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ချင်းတော့ တူနိုင်ကောင်းမှ တူမှာပါ။ မစ္စတာအိုဘားမားက သူမအတွက် ကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် အလွန်အမင်း ကံကောင်းလွန်းတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ .... တဲ့။ မစ္စ ပေလင်း ကံကောင်းပါစေ။ ဒါပေမယ့် ....။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ အယ်လင်နာ ရုစဗဲ့ရဲ့ အခြားစကားလေးနဲ့ပဲ စိုးရိမ်မှုကို ဖြေရမှာပေါ့။ သူမက ပြောထားတာ "A woman is likeatea bag. You never know how strong she is until she gets into hot water." အမျိုးသမီးတွေဆိုတာက လက်ဖက်ခြောက်ထုပ်လိုပဲ။ လက်ဖက်ခြောက်ဆိုတာကလည်း ရေပူနဲ့တွေ့မှ သူ့အရသာ ဘယ်လောက်ပြင်းတယ်ဆိုတာ အမှန်သိနိုင်တာတဲ့။ မစ္စပေလင်းရဲ့ အစွမ်းအစ ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာကလည်း တကယ့်အရေးမှာမှ သိရမှာပါ့။ သာမန်မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ရဲ့ အလှမယ်ကနေ ကမ္ဘာက မော့ကြည့်နေရတဲ့ အထင်ကရနိုင်ငံကြီးတစ်ခုရဲ့ သမ္မတယှဉ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဒုတိယနေရာကနေ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရလာတဲ့အထိ ရောက်လာတာကပင် သူမရဲ့အစွမ်းအစ မသေးငယ်လှဘူးဆိုတာတော့ အကောင်းဆုံး သက်သေတစ်ခုပေပ။ ။